संविधान विरोधी पुरुषवादी सोंच » नेपालय टाइम्स
Home / बिचार / संविधान विरोधी पुरुषवादी सोंच
March 8, 2019	Leaveacomment 147 Views
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । आधा हिस्सा ओगट्नुको अर्थ सामाजिक जीवनमा के–के फरक पर्नुपर्ने हो ? यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषय, संविधान विरोधी पुरुषवादी सोंच नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा धेरै हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । आधा हिस्सा ओगट्नुको अर्थ सामाजिक जीवनमा के–के फरक पर्नुपर्ने हो ? यहाँका सार्वजनिक कार्यक्रम होस् या सार्वजनिक महत्व राख्ने कुनै पनि विषय, त्यहाँ पुरुषकै हालीमुहाली जारी छ । कोही महिला सार्वजनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोजे भने पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जोडतोडका साथ मौलाउँदो छ । कतिले छुच्ची भएको त, कतिले सोमत नभएको आइमाइ भनेर खिसिटिउरी गर्ने प्रवृत्ति छ । अझै घरमा काम नपाएको, बिग्रिएको वा उत्ताउलीसमेत भन्न भ्याउँछन् । आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हाम्रा सार्वजनिक जीवनमा हुनुपर्ने मान्यता राख्ने र यसका लागि योग्यता र क्षमताका कुरा धेरै उठ्ने गर्छन् । के कोही पुरुष सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता पुगेर नै गएका हुन् त ? उनीहरु आफूलाई के ठान्छन्, जो सबै क्षेत्रमा आफूहरु मात्र हुनुपर्ने विचार गरिरहेका हुन्छन् ।
समाज अगाडि बढाउन पुरुषको जति नै महिलाको पनि भूमिका आवश्यकता पर्छ जसको अभाव समाज अघि बढ्न सक्दैन । महिला र पुरुष एउटै सिक्काका २ पाटा, एउटै रथका २ पाँग्रा, आधा धर्ती, आधा आकाश जस्ता नारा बेलाबेला शब्दमा सुन्न पाइन्छ । यस्ता शब्द सत्तामा रहेकाले बढी फलाक्ने गर्छन् । के उनीहरुको सत्ताले यही नारा अनुरुप व्यवहार गरेका छन् ? शासकले देखाउने रवाफ र फलाक्ने शब्द आपसमा मेल नहुँदा नै नारी आज पनि कुण्ठित र दबित भएर बाँच्नुपरेको छ । यदी एउटै सिक्काका २ पाटा व्यवहारमा लागु गरिएको भए सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति वजनदार मात्र हुने थिएन, नेपाली समाजको विकासका गति नै छुट्टै हुने थियो । आज देशको परिवेश बदलिँदो छ । सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध र यसका आयाम तीव्र गतिमा बद्लिँदैछ । यस्तो बदलावको अवस्थामा पनि पुरुषवादी सामाजिक सोंचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । जुन आजका नारीका लागि मात्र होइन समाज र स्वयं पुरुषका लागि पनि घाटा छ ।
घरबाट निस्केपछि महिलालाई घर तथा समाजमा नै बोझ सम्झिने, विश्वास नगर्ने, धेरै नाटक गर्ने र उनीहरुको परीक्षण नै नगरी क्षमता छैन भनेर हेप्ने दिन अझै कति दिन सहनुपर्ने हो ? के सधैं पुरुषवादी सोंच रहिरहँला ? धेरै हण्डर र ठक्कर खाएर अघि बढिरहेका महिलालाई अझै पनि नेपाली राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भिख कुरेर बसेको जस्तो व्यवहार देखाउँछन् । स्वतन्त्रताका लागि धेरै महिलाले ज्यान दिएका छन् । आन्दोलनका समयमा नेपालका राजनीतिक दलको एजेण्डा पनि महिला मुक्तिका ठूलाठूला कुरा गर्छन् । जब सत्तामा जान्छन्, पार्टीको र सरकारको एजेण्डामा महिला कहिल्यै पर्दैनन् । यस्तो किन हुन्छ ?
अब हामी महिलाले पनि हिसाब गर्नुपर्ने दिन आएको छ । कुनै अमुक पार्टीले वा कसैले दिएर भन्दा पनि हाम्रो अधिकारका लागि हामी आफंै जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ । घरभित्र होस् या बाहिर समाजका हरेक ठाउँमा महिला भए नभएको विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले राज्यका सबै तह समावेशी हुनुपर्ने र कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्था पालना नगरी कुनै पनि ठाउँमा पुरुषको एकलौटी अब गैरसंवैधानिक हुन्छ । के उनीहरु महिलालाई हेप्न वा देखाउन गैर संवैधानिक काम गर्न तयार भएका हुन् ? अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभकामना ।त्यहाँ पुरुषकै हालीमुहाली जारी छ । कोही महिला सार्वजनिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न खोजे भने पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति जोडतोडका साथ मौलाउँदो छ । कतिले छुच्ची भएको त, कतिले सोमत नभएको आइमाइ भनेर खिसिटिउरी गर्ने प्रवृत्ति छ । अझै घरमा काम नपाएको, बिग्रिएको वा उत्ताउलीसमेत भन्न भ्याउँछन् ।आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व हाम्रा सार्वजनिक जीवनमा हुनुपर्ने मान्यता राख्ने र यसका लागि योग्यता र क्षमताका कुरा धेरै उठ्ने गर्छन् । के कोही पुरुष सार्वजनिक क्षेत्रमा आफ्नो योग्यता पुगेर नै गएका हुन् त ? उनीहरु आफूलाई के ठान्छन्, जो सबै क्षेत्रमा आफूहरु मात्र हुनुपर्ने विचार गरिरहेका हुन्छन् । नेपालका सरकारी होस् या निजी क्षेत्र जहाँ पनि पुरुषको दबदबा छ । महिलासँग त विचार नै हुँदैन भन्ने झैं देखिने गरी उनीहरु रवाफ देखाउँछन् । यही रवाफका कारण नेपाली समाजको विकासको गति धिमा हुन पुगेको हो भन्ने बारे उनीहरु कहिल्यै सोंच्दैनन् । कुनै पनि गतिशील समाजमा हाम्रो समाजमा जस्ता अवस्था रहँदैन ।
व्यावसायिक सम्बन्धमा भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड्ने र अनुचित कार्य गर्न खोज्ने अहिले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण दिइरहेका हुन्छन् । कामको, विचारको कुरा गर्दा त्यसले के जानेकी छ र भन्ने खालको हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँछन् उनीहरु ।जो कोहीलाई पनि सम्मानजनक व्यवहार देखाउनुपर्ने सम्मानितहरुको धर्म हो । यहाँ त सम्मानित हुन अरुलाई हेप्ने प्रवृत्ति छ । महिला कुनै संस्था वा क्षेत्रको प्रमुख भइरहेका छन् । आफ्नो क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । तर उनीहरुलाई समेत पुरुषवादी सोँच पाल्नेहरु सम्मानपूर्वक व्यवहार देखाउँदैनन् । घरबाट निस्केपछि महिलालाई घर तथा समाजमा नै बोझ सम्झिने, विश्वास नगर्ने, धेरै नाटक गर्ने र उनीहरुको परीक्षण नै नगरी क्षमता छैन भनेर हेप्ने दिन अझै कति दिन सहनुपर्ने हो ? के सधैं पुरुषवादी सोंच रहिरहँला ? धेरै हण्डर र ठक्कर खाएर अघि बढिरहेका महिलालाई अझै पनि नेपाली राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भिख कुरेर बसेको जस्तो व्यवहार देखाउँछन् । स्वतन्त्रताका लागि धेरै महिलाले ज्यान दिएका छन् । आन्दोलनका समयमा नेपालका राजनीतिक दलको एजेण्डा पनि महिला मुक्तिका ठूलाठूला कुरा गर्छन् । जब सत्तामा जान्छन्, पार्टीको र सरकारको एजेण्डामा महिला कहिल्यै पर्दैनन् । यस्तो किन हुन्छ ?
अब हामी महिलाले पनि हिसाब गर्नुपर्ने दिन आएको छ । कुनै अमुक पार्टीले वा कसैले दिएर भन्दा पनि हाम्रो अधिकारका लागि हामी आफंै जागरुक हुनुपर्ने बेला आएको छ । घरभित्र होस् या बाहिर समाजका हरेक ठाउँमा महिला भए नभएको विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानले राज्यका सबै तह समावेशी हुनुपर्ने र कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । संविधानले गरेको यो व्यवस्था पालना नगरी कुनै पनि ठाउँमा पुरुषको एकलौटी अब गैरसंवैधानिक हुन्छ । के उनीहरु महिलालाई हेप्न वा देखाउन गैर संवैधानिक काम गर्न तयार भएका हुन् ?
Previous जेलिएको जम्मु-काश्मीर विवाद
Next १५ करोड रुपियाँको कारोबारसँग सकियो अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला